Dastabej » तरकारी खेती : दुःख किसानलाई, नाफा बिचौलियालाई !
तरकारी खेती : दुःख किसानलाई, नाफा बिचौलियालाई ! – Dastabej
गलकोट, १० असोज (रासस) : उसै त कोरोनाले थलिएको व्यापार, कृषि उपजले बजार भाउ नपाएको किसानको गुनासो त छँदैछ, यसमाथि बिचौलियाको मनोमानीले आहत छन् कृषक । किसानले निकै मेहेनत लगाएर फलाएको तरकारी बेचेर किसानले कमाउनेभन्दा बिचौलियाले धेरै कमाउँदा किसान सधँै मारमा पर्ने गरेको बागलुङका तरकारी तथा फलफूल किसान बताउँछन् ।
१० आश्विन २०७८, आईतवार १०:२६ प्रकाशित